Robert Mugabe won’t face prosecution in Zimbabwe, ruling party says | The Star
Members of the Zimbabwe Defence Forces rehearsed for Friday's inauguration parade in the capital of Harare. Zimbabwe is preparing to swear in Emmerson Mnangagwa after 37 years of President Robert Mugabe's rule. (The Associated Press)
HARARE, ZIMBABWE—Zimbabwe’s ruling party assured Robert Mugabe that he wouldn’t be prosecuted if he resigned, a party official said Thursday, as the fate of the 93-year-old became clearer and the country prepared to move on.
Citizens of Zimbabwe celebrate as President Robert Mugabe’s resigns after 37 years in power
He fled Zimbabwe after being fired on Nov. 6 and was in hiding during the weeklong political drama that led to Mugabe’s resignation. His appearance on Wednesday, flanked by heavy security, delighted supporters who hope he can guide Zimbabwe out of political and economic turmoil.